ချစ်တင်းနှောနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာမိန်းကလေးများယောက်ကျားလေးဆီကလိုချင်တဲ့အပြုအမူလေးတွေ | Buzzy
မိန်းကလေးအများစုက သူမရဲ့ချစ်သူကောင်လေးဆီက အမြဲတမ်းအံ့သြစရာအပြုအမူတွေကိုလိုချင်တက် ကြပါတယ်။
လူအတော်များများက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဘာလိုချင်လည်းဆိုတာကိုသိဖို့က တော်တော်ခက်ခဲတယ်လို့ပြောနေကြပေမယ့် သင်တို့နှစ်ယောက်ချစ်တင်းနှောနေတုန်း အခိုက်အတန့်မှာတော့ သူမဘာလိုချင်လည်းဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မိနျးကလေးအမြားစုက သူမရဲ့ခဈြသူကောငျလေးဆီက အမွဲတမျးအံ့သွစရာအပွုအမူတှကေိုလိုခငျြတကျ ကွပါတယျ။လူအတျောမြားမြားက မိနျးကလေးတဈယောကျဘာလိုခငျြလညျးဆိုတာကိုသိဖို့က တျောတျောခကျခဲတယျလို့ပွောနကွေပမေယျ့ သငျတို့နှဈယောကျခဈြတငျးနှောနတေုနျး အခိုကျအတနျ့မှာတော့ သူမဘာလိုခငျြလညျးဆိုတာကို သိနိုငျဖို့ကွိုးစားနတေဲ့ဘျောဒါတှအေတှကျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ချစ်တင်းနှောနေတုန်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်လိုချင်တာ အားလုံးပေါင်း (၂၁)ချက်ရှိပါတယ်။
မျက်နှာအောက်နားလေးကိုကိုင်ပြီး သူမရဲ့လျှာလေးကို အတွေ့အကြုံကောင်းလေးတွေ ပေးလိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့လျှာနဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို သာမာန် Kiss ပေးတာထက်ပိုပြီးအသုံးပြုပေးပါ။
သင့်ရဲ့အောက်နှုတ်ခမ်းနဲ့ သူမရဲ့လည်ပင်းကို အထက်အောက်သွားပေးပါ။ ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းကို လျှာလေးနဲ့ အသာအယာပွတ်သပ်ပေးပါ။
သတိထားပါ။ အသားလေးကိုက်ဖို့ဆိုတာကိုသတိထားပါ။ နှုတ်ခမ်းကိုကိုက်ပေးခြင်းဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့
စိတ်ကိုနှိုးဆွပေးလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်စေပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေက ကျန်တဲ့အရာတွေထက် အဲ့ဒီအချက်ကိုပိုပြီး သဘောကျကြပါတယ်။
မိခဈြတငျးနှောနတေုနျး မိနျးကလေးတဈယောကျလိုခငျြတာ အားလုံးပေါငျး (၂၁)ခကျြရှိပါတယျ။
မကျြနှာအောကျနားလေးကိုကိုငျပွီး သူမရဲ့လြှာလေးကို အတှအေ့ကွုံကောငျးလေးတှေ ပေးလိုကျပါ။
သငျ့ရဲ့လြှာနဲ့ နှုတျခမျးတှကေို သာမာနျ Kiss ပေးတာထကျပိုပွီးအသုံးပွုပေးပါ။
သငျ့ရဲ့အောကျနှုတျခမျးနဲ့ သူမရဲ့လညျပငျးကို အထကျအောကျသှားပေးပါ။ ပွီးတော့ နှုတျခမျးကို လြှာလေးနဲ့ အသာအယာပှတျသပျပေးပါ။
သတိထားပါ။ အသားလေးကိုကျဖို့ဆိုတာကိုသတိထားပါ။ နှုတျခမျးကိုကိုကျပေးခွငျးဟာ မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ စိတျကိုနှိုးဆှပေးလိုကျတဲ့သဘောဖွဈစပေါတယျ။အမြိုးသမီးတှကေ ကနျြတဲ့အရာတှထေကျ အဲ့ဒီအခကျြကိုပိုပွီး သဘောကကြွပါတယျ။
ထပ်သတိပေးပါရစေ။ အသာလေး ဖြည်းဖြည်းလေးပါဘဲ။
လည်ပင်းဆိုတာက မိန်းကလေးတွေရဲ့ အားအနည်းဆုံးနေရာပါဘဲ။ ဒါကြောင့်သူမရဲ့ ဂုတ်ပိုးကို ဖြည်းဖြည်းလေး
ကုတ်ခြစ်ပေးတာမျိုး အနမ်းပေးတာမျိုးက သူမကို ပိုပြီး သာယာစေနိုင်ပါတယ်။
လက်ချောင်းတွေကို မှန်ကန်တဲ့နေရာကိုအသုံးပြုလိုက်ခြင်းဖြင့် ရူးသွပ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ခံစားမှု့မြင့်တက်လာစေဖို့အတွက် သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်လေးတွေကိုအသုံးပြုပေးပါ။ ပြီးတော့ လက်အနောက်ဘက်ကိုလည်းသုံးပါ။ဒါပေမယ့် လက်သည်းတွေမရှည်ပါစေနဲ့။ လက်တခုလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းဟာ သူမကိုပိုပြီး ခံစားမှု့မြင့်
တက်စေပါတယ်။ ငြင်ငြင်သာသာလေးကိုင်ပေးပါ။ သာသာယာယာလေး အသုံးပြုပါ။
အချိန်အနည်းငယ်လောက်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ရင်သားတွေနဲ့ တင်ပါးတွေကို ညင်သာစွာ ကိုင်ပေးထားပါ။
သူမက ချွေးတွေထွက်မှာစိုးလို့ လက်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်မိရင်တောင် ဆက်ပြီးတော့သာ ကိုင်ထားလိုက်ပါ။
ထပျသတိပေးပါရစေ။ အသာလေး ဖွညျးဖွညျးလေးပါဘဲ။
လညျပငျးဆိုတာက မိနျးကလေးတှရေဲ့ အားအနညျးဆုံးနရောပါဘဲ။ ဒါကွောငျ့သူမရဲ့ ဂုတျပိုးကို ဖွညျးဖွညျးလေး
ကုတျခွဈပေးတာမြိုး အနမျးပေးတာမြိုးက သူမကို ပိုပွီး သာယာစနေိုငျပါတယျ။
လကျခြောငျးတှကေို မှနျကနျတဲ့နရောကိုအသုံးပွုလိုကျခွငျးဖွငျ့ ရူးသှပျအောငျပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
ခံစားမှု့မွငျ့တကျလာစဖေို့အတှကျ သငျ့ရဲ့လကျခြောငျးထိပျလေးတှကေိုအသုံးပွုပေးပါ။ ပွီးတော့ လကျအနောကျဘကျကိုလညျးသုံးပါ။ဒါပမေယျ့ လကျသညျးတှမေရှညျပါစနေဲ့။ လကျတခုလုံးကိုအသုံးပွုခွငျးဟာ သူမကိုပိုပွီး ခံစားမှု့မွငျ့
တကျစပေါတယျ။ ငွငျငွငျသာသာလေးကိုငျပေးပါ။ သာသာယာယာလေး အသုံးပွုပါ။
အခြိနျအနညျးငယျလောကျဘဲဖွဈဖွဈ ရငျသားတှနေဲ့ တငျပါးတှကေို ညငျသာစှာ ကိုငျပေးထားပါ။
သူမက ခြှေးတှထှေကျမှာစိုးလို့ လကျကိုဖယျထုတျလိုကျမိရငျတောငျ ဆကျပွီးတော့သာ ကိုငျထားလိုကျပါ။
ပြီးတော့ ကြင်ကြင်နာနာ၊ငြင်ငြင်သာသာလေး လက်ဝါးနဲ့ရိုက်ပေးပါ။
Phoebe Buffay လို့ခေါ်တဲ့ ဂီတပညာရှင်အမျိုးသမီးကပြောဖူးပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ရင်သားတွေ၊တင်ပါးတွေကို Adam ရဲ့ ပန်းသီးတစ်လုံးလိုရဲနေအောင်ထိမရိုက်ဖူးဆိုရင်တော့ ကြိုက်ပါတယ်တဲ့။
သူမရဲ့နှုတ်ခမ်းးတွေကို အနားပေးပါ။ဒါပေမယ့် သင်ကတော့ နားလို့မရပါဘူး။ ဘာလို့ဆိုတော့ သူမရဲ့ ရင်ဘတ်တွေ၊
မျက်လုံးချင်းစကားပြောတာလောက် ဘယ်အရာက ပိုကောင်းနိုင်သေးသလည်း? ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား?
ပွီးတော့ ကွငျကွငျနာနာ၊ငွငျငွငျသာသာလေး လကျဝါးနဲ့ရိုကျပေးပါ။
Phoebe Buffay လို့ချေါတဲ့ ဂီတပညာရှငျအမြိုးသမီးကပွောဖူးပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ရငျသားတှေ၊တငျပါးတှကေို Adam ရဲ့ ပနျးသီးတဈလုံးလိုရဲနအေောငျထိမရိုကျဖူးဆိုရငျတော့ ကွိုကျပါတယျတဲ့။
သူမရဲ့နှုတျခမျးးတှကေို အနားပေးပါ။ဒါပမေယျ့ သငျကတော့ နားလို့မရပါဘူး။ ဘာလို့ဆိုတော့ သူမရဲ့ ရငျဘတျတှေ၊
မကျြလုံးခငျြးစကားပွောတာလောကျ ဘယျအရာက ပိုကောငျးနိုငျသေးသလညျး? ဟုတျတယျမဟုတျလား?
သင့်ချစ်သူရဲ့ ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ နားတွေကိုလည်းအလဟဿမထားပါနဲ့။
နား အနားကိုသွားပြီး ဖြေးဖြေးလေး အသက်ရှုပေးပါ။ နမ်းပေးပါ။ နားတစ်ဝိုက်ကိုလျှာနဲ့လျက်ပေးပြီး စုပ်ပေးပါ။ ဗီးနပ်စ်ရဲ့အချစ်အတွက်ဆိုရင်တော့ နား နားသွားပြီးတော့ အသက်ပြင်းပြင်းမရှုမိပါစေနဲ့။
အပေါ်ကနေဘဲနေပြီးတော့ တခြား ဘက်တွေကိုလျှောက်မလှည့်မိပါစေနဲ့။
အမျိုးသမီးတွေက ယောက်ကျားရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်သူတို့အပေါ်ကိုရောက်နေတာကို ကြိုက်ကြပါတယ်။
သူမကို ချစ်တင်းနှောခြင်းရဲ့ အလယ်ပိုင်းကို ခံစားစေဖို့အတွက် ပေါင်အချင်းချင်းပွတ်သပ်ပေးပါ။ အဲ့ဒီနည်းလမ်းက
လည်း သူမကို ဖွင့်ဟလာစေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုပါဘဲ။
နားအနားကပ်ပြီးတော့ sex ပိုင်းဆိုင်ရာ အညစ်အပတ်လေးတွေအနည်းငယ်တော့ပြောပေးပါ။
ဘယ်သူကအဲ့အချိန်အဲ့လိုပြောလို့မကြိုက်ဘဲနေပါ့မလည်း?အကြာကြီးနဲ့ အဝေးကြီးကနေမပြောမိ ဖို့တော့အထူးသတိထားပေးပါ။
သငျ့ခဈြသူရဲ့ ထိလှယျရှလှယျတဲ့နရောဖွဈတဲ့ နားတှကေိုလညျးအလဟဿမထားပါနဲ့။
နား အနားကိုသှားပွီး ဖွေးဖွေးလေး အသကျရှုပေးပါ။ နမျးပေးပါ။ နားတဈဝိုကျကိုလြှာနဲ့လကျြပေးပွီး စုပျပေးပါ။ ဗီးနပျဈရဲ့အခဈြအတှကျဆိုရငျတော့ နား နားသှားပွီးတော့ အသကျပွငျးပွငျးမရှုမိပါစနေဲ့။
အပျေါကနဘေဲနပွေီးတော့ တခွား ဘကျတှကေိုလြှောကျမလှညျ့မိပါစနေဲ့။
အမြိုးသမီးတှကေ ယောကျကြားရဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျသူတို့အပျေါကိုရောကျနတောကို ကွိုကျကွပါတယျ။
သူမကို ခဈြတငျးနှောခွငျးရဲ့ အလယျပိုငျးကို ခံစားစဖေို့အတှကျ ပေါငျအခငျြးခငျြးပှတျသပျပေးပါ။ အဲ့ဒီနညျးလမျးကလညျး သူမကို ဖှငျ့ဟလာစဖေို့အကောငျးဆုံးနညျးလမျးတှထေဲကတဈခုပါဘဲ။
နားအနားကပျပွီးတော့ sex ပိုငျးဆိုငျရာ အညဈအပတျလေးတှအေနညျးငယျတော့ပွောပေးပါ။
ဘယျသူကအဲ့အခြိနျအဲ့လိုပွောလို့မကွိုကျဘဲနပေါ့မလညျး?အကွာကွီးနဲ့ အဝေးကွီးကနမေပွောမိ ဖို့တော့အထူးသတိထားပေးပါ။
ချစ်တင်းနှောဖို့အစပျိုးနေတုန်းအချိန်မှာဘဲ သူမကို နံရံထောင့်တစ်ထောင့်စီရောက်အောင် ဆွဲခေါ်သွားပါ။ ထောင့်တစ်ထောင့်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာလည်းသူမသိအောင်ပြုလုပ်ပေးပါ။
ဘော်ဒါတွေရဲ့အပြုအမူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သူမရဲ့သဘောထားကိုမေးမေးပေးတာကလည်း ချစ်တင်းနှောရာမှာလိုအပ်တဲ့အချက်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ သင်က တင်ပါးတွေနဲ့ ရင်သားတွေကိုမကိုင်ခင် ကိုင်တော့မယ်ဆိုတာ ကို
သူမသိသွားအောင် အချို့သောလှုပ်ရှားမှု့တွေကိုပြခြင်းအားဖြင့် အရိပ်အယောင်ပြပေးပါ။
ခဈြတငျးနှောဖို့အစပြိုးနတေုနျးအခြိနျမှာဘဲ သူမကို နံရံထောငျ့တဈထောငျ့စီရောကျအောငျ ဆှဲချေါသှားပါ။ ထောငျ့တဈထောငျ့ကိုရောကျနပွေီဆိုတာလညျးသူမသိအောငျပွုလုပျပေးပါ။
ဘျောဒါတှရေဲ့အပွုအမူတှနေဲ့ပတျသကျပွီးတော့ သူမရဲ့သဘောထားကိုမေးမေးပေးတာကလညျး ခဈြတငျးနှောရာမှာလိုအပျတဲ့အခကျြဘဲဖွဈပါတယျ။
ဥပမာ သငျက တငျပါးတှနေဲ့ ရငျသားတှကေိုမကိုငျခငျ ကိုငျတော့မယျဆိုတာ ကို
သူမသိသှားအောငျ အခြို့သောလှုပျရှားမှု့တှကေိုပွခွငျးအားဖွငျ့ အရိပျအယောငျပွပေးပါ။
အရမ်းကြီးလည်းမကြမ်းပါနဲ့အုံး။ကြင်ကြင်နာနာ ညင်ညင်သာသာလေးပါဘဲ။ ရုတ်တရက်အမူအယာတွေကျင့်သုံးပေးပါ။
ဘယ်လိုလည်းဆိုတော့ သင့်ရဲ့ အမူအရာတွေကသူမမမျှော်လင့်ထားတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်စေပြီးတော့ အံ့သြစရာတွေ
သူမရဲ့နောက်ကျောနဲ့အောက်ဘက်တစ်လျှောက်လုံးကို နမ်းဖို့ မမေ့ပါစေနဲ့။
အရမျးကွီးလညျးမကွမျးပါနဲ့အုံး။ကွငျကွငျနာနာ ညငျညငျသာသာလေးပါဘဲ။ ရုတျတရကျအမူအယာတှကေငျြ့သုံးပေးပါ။
ဘယျလိုလညျးဆိုတော့ သငျ့ရဲ့ အမူအရာတှကေသူမမမြှျောလငျ့ထားတဲ့ပုံစံတှဖွေဈစပွေီးတော့ အံ့သွစရာတှေ
သူမရဲ့နောကျကြောနဲ့အောကျဘကျတဈလြှောကျလုံးကို နမျးဖို့ မမပေ့ါစနေဲ့။
ကားထဲမှာဆိုရင်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဒါပေမယ့် သူမစိတ်ထဲမှာ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးဆိုရင်တော့
နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့ ကောင်မလေးရဲ့မျက်လုံးထဲကိုသေချာကြည့်ပြီး အရမ်းလှတာဘဲကွာ လို့ ပြောလိုက်
အကုန်လုံးအဆင်ပြေပြီးတော့ အချစ်တွေ မဆုံးရှုံးပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပါတယ်ဘော်ဒါတို့ရေ.......။
ကားထဲမှာဆိုရငျတော့ ကိစ်စမရှိပါဘူး။ဒါပမေယျ့ သူမစိတျထဲမှာ အဆငျသငျ့မဖွဈသေးတဲ့ပတျဝနျးကငျြမြိုးဆိုရငျတော့
နောကျဆုံးအခြိနျမှာတော့ ကောငျမလေးရဲ့မကျြလုံးထဲကိုသခြောကွညျ့ပွီး အရမျးလှတာဘဲကှာ လို့ ပွောလိုကျ
အကုနျလုံးအဆငျပွပွေီးတော့ အခဈြတှေ မဆုံးရှုံးပါစနေဲ့လို့ဆုတောငျးပါတယျဘျောဒါတို့ရေ.......။
ref : sarcasm